Cartography - Geofumadas
Zvikumbiro uye zvigadzirwa zve sayenzi iyo inotarisira chidzidzo uye kujekeswa kwemamiriro emaguta.
IMARA.PASI pekutanga iyo inokanganisa kukanganisa kwezvakatipoteredza
Kune chinyorwa chechitanhatu cheTwingeo Magazine, takave nemukana wekubvunzurudza Elise Van Tilborg, Co-muvambi weIMARA. Uku kutanga kweDutch nguva pfupi yadarika kwakakunda iyo Planet Dambudziko kuCopernicus Masters 6 uye yakazvipira kune nyika inoenderera nekushandisa zvakanaka nharaunda. Chirevo chavo ndechekuti "Fungidzira yako mamiriro ezvakatipoteredza", uye vanoita ...
Cadastre drone the mano Geomatics GIS
Cartography, Cadastre, Geospatial - GIS
Entrepreneurship nyaya. Aishai.com
Mune ino yechitanhatu edition yeTwingeo Magazine isu tinovhura chikamu chakatsaurirwa kune bhizimusi, panguva ino yaive nguva yaJavier Gabás Jiménez, uyo Geofumadas akaonana naye pane dzimwe nguva kuitira mabasa nemikana inopihwa kunharaunda yeGEO. Kutenda rutsigiro uye kutyaira kwenharaunda yeGEO, isu takakwanisa kunyora chirongwa che ...
Cartography, Kudzidzisa CAD / GIS, Geospatial - GIS
Master mune zveMutemo maGeometri.
Chii chaunotarisira kubva kuna Tenzi muMutemo maGeometri. Munhoroondo yese zvakatemwa kuti iyo real estate cadastre chishandiso chinoshanda kwazvo chekutarisira ivhu, nekuda kweizvi, zviuru zvematunhu nenzvimbo dhata zvine chekuita nenyika zvinowanikwa. Kune rimwe divi, isu takaona izvo nguva pfupi yadarika ...
Cartography, Cadastre, Kudzidzisa CAD / GIS, Geospatial - GIS
Scotland inobatana nePublic Sector Geospatial Chibvumirano
Hurumende yeScotland neGeospatial Commission vakabvumirana kuti kubva muna Chivabvu 19, 2020 Scotland ichave chikamu chePublic Sector Geospatial Agreement ichangoburwa. Ichi chibvumirano chenyika chobva chatsiva chibvumirano cheScotland Mapping Agreement (OSMA) uye neGreenspace Scotland zvibvumirano. Vashandisi veHurumende yeScotland, ...
Cartography, Geospatial - GIS, Innovations
HERE uye Loqate Kuwedzera Kubatana Kuti Batsira Bhizinesi Kugadziridza Kuendesa
HERE Matekinoroji, data renzvimbo uye mapuratifomu chikuva, uye Loqate, anotungamira musimudziri wesarudzo yepasirese kero uye geocoding mhinduro, vazivisa hushamwari hwakawedzera hwekupa mabhizinesi neazvino mukutora kero, kusimbisa uye tekinoroji ye geocoding. Mabhizinesi mumaindasitiri ese anoda data rekero ...
Enzanisa uhu hwenyika
Isu tanga tichitarisa kune inonakidza peji, inonzi thetruesizeof, yanga iri pamambure kwevamwe makore uye mairi - nenzira yekudyidzana uye yakapusa - mushandisi anogona kuenzanisa kwenzvimbo yepasi pakati penyika imwe kana dzinoverengeka. Tine chokwadi chekuti mushure mekushandisa ichi chishandiso, iwe unenge uine ...
EOS inokubvumira kuti uite zvirongwa zvekugadzira mifananidzo mumushanduri
Mazhinji emabasa ekuongorora zvemifananidzo aida iyo Erdas Fungidzira kana ENVI software yave online online nekuda kweiyo EOS Platform. Iyi nyowani itsva yevhisi sevhisi yakatangwa neEOS Data Analytics kune veGIS nyanzvi mhinduro yakazara yekutsvaga, kuongorora, kuchengetedza uye kuona kukuru ...
Inowanikwa Yemahara - Template yekushandura UTM inoenderana neGeographic
Nguva shoma inopiwa
Mikana yakawanda yekushandisa yeWebhu GIS panguva ino
Musoro wekutaura nhasi ndeye Webhu GIS. Kune iyo 'isingazivikanwe', inogona kungoshandurwa se 'GIS paWebhu', asi izvi zvinorevei chaizvo? Ndezvipi zviyero zvaro? Nei 'iine mikana yakawanda yekushandisa' sezvakataurwa mumusoro weichi posvo? Pane zvikonzero zvishanu izvo Eric van Rees anoshandisa mu ...
Ichi chinyorwa chinonakidza naRegis Wellausen chakaburitswa mu MundoGEO Magazini, iyo inotiyeuchidza nezvekusagadziriswa kweaya Catastro2014 zvirevo zvakasimudzwa neFIG makore makumi maviri apfuura, kunyanya zvine chekuita nemodeling seinotsiva yechinyakare cartography. Iyo positional resolution yekumisikidza kutsiva iyo kuchembera paradigm.…
Hukuru hwechokwadi hwenyika
thetruesize.com inzvimbo inonakidza, mune nyika dzinogona kuwanikwa paGoogleMaps muoni. Nekudhonza zvinhu, iwe unogona kuona kuti nyika dzakashatiswa sei nemusiyano mu latitude. Sezvinoratidzwa mumufananidzo, iyo cylindrical fungidziro, kana kuyedza kuita fungidziro pane ndege inomanikidza iyo ...
Cartography, Google pasi / mamapu
25,000 mapoka pasi rose anowanikwa kuti adzikinwe
Iyo Perry-Castañeda Raibhurari Mepu Unganidzo inosanganisa inosanganisa ine anopfuura mazana mazana maviri nemakumi mashanu emamepu akaongororwa uye akawanikwa online. Mazhinji emamepu ari munharaunda yeveruzhinji uye vangangoita zviuru makumi maviri nezvishanu zviripo. Semuenzaniso, tinoratidza mamwe mepu anowanikwa mu ...
Cartography, Kudzidzisa CAD / GIS, Internet uye Blogs
Nhanganyaya ye Remote Sensing Course
Ziva simba rekunze kunzwa. Une ruzivo, inzwa, pfuudzira uone zvese zvaungaite iwe usingavepo ....